IQEBENGWANA LEKHEKHE LOMTSHATO LIKAPRINCESS DIANA ELILELABANTU NGAMASHUMI EMINYAKA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Indoda yaseFlorida ibingumnini oziqhenyayo ngeqhekeza lekhekhe lomtshato likaPrincess Diana ngaphezulu kweminyaka engama-36
Indoda yaseFlorida ibingumnini oziqhenyayo ngeqhekeza lekhekhe lomtshato likaPrincess Diana ngaphezulu kweminyaka engama-36
I-UNITED KINGDOM-JULY 29: Ngomhla wama-29 kuJulayi 1981, uLady Diana SPENCER (oneminyaka eli-19 ubudala) watshata iNkosana u-CHARLES (oneminyaka engama-32) eBuckingham Palace. (Ifoto ngu-Keystone-France / Gamma-Keystone ngokusebenzisa imifanekiso ka-Getty)
Ngu: Kelly Spears 08/18/2017 ngo-4: 00 PM
Indoda yaseFlorida yonwabile kukukhumbula uPrincess Diana kangangokuba uneememori zeedola ezingama-500 000 zokumkhumbuza ngobukumkani-kubandakanya iqhekeza lekhekhe kumtshato wakhe we-1981 ukuya kwiNkosana uCharles.
Ngokwe- Tampa Bay Amaxesha , UJohn Hoatson ufumene ikeyiki emva kokuba iislivers zeetoni ezintlanu zinikezelwe njengendawo yokugcina izinto. U-Hoatson, uneminyaka engaphezulu kwe-13,000 ye-Princess Di egcina ikhaya lakhe e-Fort Lauderdale, uthi ikeyiki yeyona nto ayithandayo. Yiqhekeza leziqhamo. Ayizukuguga, uxelele ukupapashwa. Igcinwe ngumoya.
Isilayi esibhokisi sekeyiki yomtshato, esivela kumtshato waseBritani wasebukhosini weNkosana uCharles, iNkosana yaseWales kunye nenkosikazi yakhe yokuqala uDiana, eqokelelwe nguLeonard Massey, owayengumqhubi wokuqala kuKumkanikazi u-Elizabeth II, uboniswe kwihotele i-Stafford eLondon ngo Nge-5 kaJuni ka-2015, ngaphambi kwefandesi yayo eBeverly Hills, e-US, nge-27 kaJuni. Iziqwenga ezivela kwizonkana zemitshato emihlanu yasebukhosini yase-Bhritane eqala kwiminyaka engama-42 zibekelwe ifandesi- zikhatshwa sisilumkiso sezempilo ilungele ukusetyenziswa. I-AFP PHOTO / BEN STANSALL (Ifoto yemboleko kufuneka ifundwe yiBEN STANSALL / AFP / imifanekiso kaFetty)
U-Hoatson uzimisele ukugcina imbali kunye nebali lika-Princess Diana. Wayeneminyaka esibhozo kuphela ubudala, wathandana nasebukhosini ngelixa wayebukele umtshato owawuboniswa kumabonwakude. Wayekwangoyena mntu mhle emhlabeni, ukhumbule. Ndamlandela ubomi bakhe bonke. Ndandiwuthanda umsebenzi wakhe wokunceda abantu. Ndinefoto yakhe kwindawo yam yokulala ebusuku kwikholeji yonke.
Kunye nekhekhe elidume ngoku, uHoatson ungumnikazi weethokheni zokulungiselela kwangaphambili. [UDiana] wayengumbhali wekhadi, waqaphela. Ndineleta yokubandakanyeka evela kanye emva kokuba etshate noCharles. Ityikityiwe 'Lady Diana.'
iilokhwe zokunxiba kumsitho womtshato
(FILE FOTO) Kulo mfanekiso udibeneyo uthelekiso phakathi kweekhekhe zoMtshato wasebukhosini zeNkosana uCharles, iNkosana yaseWales kunye neLady Diana Spencer naleyo yeNkosana uWilliam noCatherine, iDuchess yaseCambridge. UAvery ngekhekhe lomtshato wasebukhosini elenzelwe umtshato weNkosana uCharles noPrincess Diana, nge-29 kaJulayi 1981. (Ifoto ngu-Princess Diana Archive / Getty Izithombe) (Umfanekiso osekunene) LONDON, ENGLAND - APRILI 29: UFiona Cairns umi ecaleni kwekhekhe lomtshato wasebukhosini yena neqela lakhe eFiona Cairns Ltd yaseLeicestershire yenzelwe iPrince William kunye noCatherine Middleton kwiGalari yemifanekiso yeBuckingham Palace ngo-Epreli 29, 2011 kumbindi weLondon, eNgilane. Umtshato weNkosana uWilliam, owesibini ngokulandela itrone yaseBritane, noCatherine Middleton ubanjelwe eLondon namhlanje. Ubhishophu omkhulu waseCanterbury uqhube inkonzo ebizinyaswe ziindwendwe ezili-1900, kubandakanya namalungu osapho lwasebukhosini angaphandle kunye neentloko zikarhulumente. Amawakawaka abantu abavela kwihlabathi liphela baye bathontelana ukuya eLondon ukuza kubukela umnyhadala kunye nemiboniso yomtshato wasebukhosini kunye namaqela ezitalato abanjelwe e-UK. (UJohn Stillwell-WPA Pool / imifanekiso kaFetty)
Kuthathe uHoatson iminyaka emininzi ukwakha ingqokelela yakhe, kwaye akanazicwangciso zokuthengisa ezona zinto zixabisekileyo. Emva kokubhubha kukaDiana e1997, waqala ukubhala iileta kubantu abazi inkosazana, becela ukuba batyikitye kunye nezikhumbuzo. Ukusuka apho, ingqokelela yakhe yakhula. Ndicinga ukuba kuyanceda ukuba abantu bazi ukuba andizukuthengisa ngayo. Ayisiyiyo le nto, wachaza.
Yintoni elandelayo ngomqokeleli? Uhambo phesheya Ndiyathemba ukuba ndingahamba ndiye eNgilane kamva kule nyanga yesikhumbuzo, waqukumbela. Ndaya ngo-1996, ndazama kakhulu ukumlandela ukuze ndimbone ndaweni ithile, kodwa andizange ndenze njalo. IBuckingham Palace inedesika yayo ebonisiweyo. Ndingathanda ukuyibona loo nto.
izipho zomtshato kwisibini esinayo yonke into
yintoni impahla yokunxiba yomtshato
Umtshato oya apho konke kubandakanya
Uyilo lwabapheki ekhitshini